Maalinta: Meey 21, 2019
Manisa - Khadka Bandirma Km: 122 + 970 Isgoyska Heerka iyo Saldhigga Suleymanli Inta udhaxeysa Howgalka Wadada Wadada Loading ee Wadada Wadnaha taas oo ay sabab u tahay Qandaraaska Jamhuuriga ee Wadada Tareenka ee 3. Iibsiga Gobolka iyo Suuqa [More ...]
Diyaargarowga Gelitaanka Tunnel No: 3 Inta u dhaxaysa Selçuk iyo Çamlık
Qabanqaabada Galida Wadada 3 inta udhaxeysa Selçuk iyo Çamlık Natiijad ahaan oo ka dhaceysa qandaraaska TC State Railways Maamulka 3. 2019 / 199291 GCC qiimaha xaddidan ee Adeegga Iibsiga Gobollada iyo Maareynta Adeegga Maaraynta Kaydka (TCDD) 329.125,30 TL [More ...]
Adeegga 7 ee Wadooyinka Wadooyinka ah ee ay bixiso Dawlada Hoose, 84,6 Milyan Dakhli Lacag ah
M. Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha, wuxuu caddeeyay in adeegga 53 ee ay bixiso Agaasimaha Guud ee Sharciga Jaangoynta loo wareejiyay e-Dowladda. [More ...]
In kasta oo garoonka diyaaradaha Çorum uu hadda yahay mawduuc waqti cayiman, way adag tahay in la fahmo dib-u-eegista ku-meel-gaarka ah! Corum Haber wuxuu ku hadlayey wax la mid ah sanado badan hadana hadda waa laga aqbalaa meelaha ugu sarreeya gobolka. Marka hore, mashruuca tareenka waa mid gaabis ah [More ...]
Madaxwayne, waxaan ka dhignay boqolkiiba 50 ee IZBAN
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu fariin u diray İzmir isagoo u sii maraya İZBAN. Erdogan ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in khadka Isgaarsiinta Izmir ee Izmir (IZBAN) boqolkiiba 50 Wasaaradda Gaadiidka ay tiri. Madaxweyne Recep Tayyip [More ...]
Furan albaabada hoosteeda ee Afyonkarahisar
Jardiinooyinka, isgoysyada, marinnada dhulka hoostooda, burooyinka iyo irdaha magaalada iyo meelaha laga soo galo ayaa bilaabay in lagu qurxiyo ubax xilliyeedka. Markaad gashid maalmaha ugu dambeeya gu'ga roobka, Afyonkarahisar ka dib markii la dareemayo kororka kuleylka hawada [More ...]
Karsan 'Electric Minibus Gesture Electric' ee wadooyinka Yurub
Gawaarida korantada ee Karsan, Jest Electric, ayaa bilaabay inay ka adeegato wadooyinka Yurub. Gaariga ayaa markii ugu horreysay la gaarsiiyay Faransiiska, Jarmalka, Romania, Boortaqiiska iyo Slovakia. Maamulaha shirkadda Karsan Okan Baş ayaa yidhi, elektrikli baabuur koronto ayaa laga furay Lithuania [More ...]
Dayactirka wadada Alanya Gedevet
Dowladda Hoose ee Antalya, oo ku taal waqooyiga Alanya Gedevet Plateau Kizilalan ee dayactirka iyo shaqada dayactirka ayaa la bilaabay. Wadada oo ka kooban dhul-gariir iyo ilko-galeenno ayaa isu diyaarinaya xagaaga. Gedevet Plateau, oo badanaa lagu isticmaalo wakhtiga xagaaga ee Alanya [More ...]
Tareenka dhulka, oo lagu muujiyey Balıkesir Gar basin, waxaa u direy Manisa Agaasimaha Guud ee TCCD. Ka dib markii uu ku shaqeynayay Balıkesir sannadihii 1960 oo uu lumiyay halgankiisii ​​tiknoolajiyada, 20 ayaa leh [More ...]
Miisaaniyadu waxay ka shaqaysaa tareenka xawaaraha sare ee Manisa
Degmada Salihli ee Manisa, waxaa laga helay xabaal intii lagu jiray qodista intii lagu jiray Mashruuca Tareenka Sare ee Xawaaraha Sare (YHT), kaasoo isku xiri doona Ankara iyo Izmir. Marka loo eego macluumaadka la helay, kaas oo ku xidhi doona Ankara iyo Izmir [More ...]
RayHaber 21.05.2019 Warbixinta Shirka
Xariiqda Alsancak-Eğirdir Gon Gonıı Kaklık Xariga udhaxeeya Xariga Dhismeedka Grilles Wing Wall Construction Manisa-Bandırma Line Km: 280 + 120 - 280 + 270 inta udhaxeysa Sahayda Dhismaha Darbiga Dhismaha ee Anatolian DMU Golaha Muhiimka ah ee Golaha Wasiirada (TÜVASAŞ) [More ...]